कस्तो अचम्म ! जहाँ ब्वाईफ्रेण्ड किन्न पाइन्छ - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो अचम्म ! जहाँ ब्वाईफ्रेण्ड किन्न पाइन्छ
जापान, असार ३१ । एउटा नयाँ बिजनेश सूरु भएको छ, जहाँ ब्वाईफ्रेण्डलाई भाडामा दिने गरिन्छ ।
यो सर्भिसको नाम रोजशिप दिइएको छ । यस सर्भिसलाई युवतीहरु घण्टा वा दिनका हिसाबले उपभोग गर्छन् । सर्भिसका लागि उभिएका युवाहरुबाट युवतीले एकजना चुन्ने काम गर्छिन् ।
युवतीले युवक बुकिङ गर्न मिल्ने समेत सुविधा रहेको छ । सेवा शुल्क चाहिँ बुकिङ समयअनुसार हुने बताइएको छ । यस सर्भिसमा गुडनाइट प्याकेज पनि रहेको छ ।
यतिमात्रै होइन युवकले युवतीलाई खाना पकाएर समेत खुवाउने गर्छन् । यस सर्भिसको प्रयोग गर्ने महिलाहरुको उमेर ३०–४० सम्म रहेको छ भने युवकहरुको उमेर २०–३० सम्म रहेको छ । एजेन्सी
याे पनि पढ्नुस दुर्घटनामा हात भाँच्चिएका दिपेन्द्रलाई अछाम सरोकार मञ्च जापानद्वारा आर्थिक सहयोग